DF oo war cad ka soo saartay xariggii C/raxmaan C/shakuur iyo maxkamad oo... - Caasimada Online
Home Warar DF oo war cad ka soo saartay xariggii C/raxmaan C/shakuur iyo maxkamad...
DF oo war cad ka soo saartay xariggii C/raxmaan C/shakuur iyo maxkamad oo…
Muqdisho (Caasimadda Online) – Dowladda Soomaaliya ayaa goor dhow war ka soo saartay xariggii iyo howl galkii xalay lagu qaaday Siyaasiga C/raxmaan C/shakuur, kaasoo Ciidamo ka tirsan Nabadsugida ay ugu dhaceen gurigiisa, kuna soo xireen.
Wasaaradda Amniga Somaaliya ayaa ka hadashay howlgal Ciidamad Dowladda ay ka sameeyeen Guriga uu Magaalada Muqdisho ka degganyahay C/Raxmaan C/Shakuur Warsame,kaas oo laftiisa ay xireen Ciidamada Dowladda.
Afhayeenka Wasaaradda Amniga, ayaa sheegay in Guriga C/Raxmaan iyo Ragga kale ee Gurigaas ku jiray ay ahaayeen dambiilayaal qaranka dambi ka galay islamarkaana C.Raxmaan C/Shakuur laftiisa uu diiday in baaritaan lagu sameeyo.
Afhayeenku waxaa uu sheegay in Ciidanka Ilaalada C/Raxmaan C/Shakuur ay Rasaasta billaabeen sidaasna ku biloowday isku dhicii xalay.
Haddaba halkaan hoose ka akhriso warka kasoo baxay dowladda
Sidaad la socotiinba hay’adaha Amniga iyo Xeer Illaalinta waxey maalmahan wadeen baaris danbiyo muwaadiniin Soomaaliyeed oo lagu tuhunsanyahay fal dambiyeedyo Qiyaano Qaran, khal-khal gelin iyo burburin nidaamka dowladnimada. Waxaa reeban in muwaadin uu u adeego dano shisheeye oo ka soo horjeeda jiritaanka dowladnimada Soomaaliyeed.
Guriga ayaa waxaa ku sugnaa Mudane Cabdiraxman Cabdishakur Warsame oo ahaa shaqsigii ruqsada loo soo qaatay uuna si cad uga horyimid awaamiirtii hay’adaha amniga, ka dibna ay ciidankii illaalada u ahaa ay rasaas ku bilaabeen ciidanka amniga. Bacdamaa uu muwaadinkan diiday inuu u hoggaansamo awaamiirta hay’adaha sharciga kalana horyimid dagaal hubeysan ayey ciidamadu ku guuleysteen isagoo bad qaba ay gacanta ku soo dhigeen. Sidoo kale waxay hay’adaha amniga la soo wareegeen qalab la aaminsanyahay inay qeyb weyn ka qaadan doonto baarista iyadoo sharciga waafaqsan.
Sidaas daraadeed, shacabka waxaan ka codsaneynaa inay la shaqeeyaan hay’adaha amniga iyo sharci-fulinta, iyadoo Dowladda Federaalka ay dammaanad qaadeyso xaquuqda muwaadin kasta uu siiyey dastuurka iyo shuruucda dalka. Muwaadinkan waxuu helayaa baaris hufan waxaana la horgeynayaa maxkamada awooda u leh oo uu ka heli doono caddaalad.
Ugu danbeyntii, shacabka Soomaaliyeed, waxaa loogu baaqayaa inay kaalin ka qaataan amniga iyo nabadeynta kana fogaadaan fal kasta oo keeni kara xasilooni daro siyaasadeed iyo mid amni. Muwaadin kasta waxaa waajib ka saaran yahay inuu danta guud ee dalka uu ka horumariyo danihiisa gaar-gaarka